Uyakuthanda ukuthwebula izithombe, ngakho-ke, Instagram iyinethiwekhi yokuxhumana oyithandayo njengoba iyisikhulumi se-multimedia esithandwa kakhulu sokuthumela izithombe namavidiyo. Uzibheka njengomthwebuli wezithombe ohlukile futhi ithalente lakho alibuzwa nhlobo: ubufakazi balokhu abantu abaningi abakulandelayo nsuku zonke futhi "bathanda" izithombe ozibhalayo.
Usho kanjani? Kunjalo futhi yingakho uzibuze ukuthi ngabe zikhona yini Uhlelo lokusebenza ukubona ukuthi ngubani obheka iphrofayili yakho ye-Instagram? Ungathanda ukwazi okwengeziwe ngabantu abakulandelayo, kepha ungazi ukuthi ungakwenza kanjani? Uma kunjalo, ungakhathazeki: kulesi sifundo ngizokunikeza lonke ulwazi oluwusizo mayelana nokusebenzisa isikhulu Instagram Kunikezelwe ukuhlaziya i-akhawunti yakho.
Lokho kusho ukuthi, uma manje usuphelelwe yisineke sokuya emsebenzini, ngikumema ukuba uhlale phansi ngokunethezeka uthathe imizuzu embalwa yesikhathi samahhala, ukunikela ekufundeni ngokucophelela lo mhlahlandlela wami. Landela izinqubo esengizokunika zona igxathu negxathu futhi uzobona ukuthi, ngesikhathi esifushane, uzothola imininingwane oyidingayo. Ingabe usukulungele ukuqala? Yebo? Kuhle kakhulu! Ngalesi sikhathi, enginakho ukukwenza nje ukukufisela okuhle ufunde!
Isicelo sokubona ukuthi ngubani obheka iphrofayili yakho ye-Instagram mahhala
Ungazi kanjani ukuthi ngubani obuka iphrofayili yakho ye-Instagram
Ungayakha kanjani iphrofayili ye-Instagram yebhizinisi
Hlaziya izibalo zakho zephrofayela
Bona ukuthi ubani obona izindaba
Njengoba uzibuza ukuthi kungenzeka yini usebenzise Uhlelo lokusebenza ukubona ukuthi ngubani obheka iphrofayili yakho ye-Instagram Kubalulekile ukuthi unikeze ngemininingwane ewusizo yangasemuva kulokhu.
Ngale ndlela, empeleni, okokuqala kufanele wazi ukuthi azikho izinhlelo zokusebenza ezingabhala amagama alabo abavakashela iphrofayili yakho. Instagram ngaphandle kokuxhumana naye nganoma iyiphi indlela.
Kodwa-ke, ukube ubuzikhombe ngokuzimela izinhlelo ze- Android mi i-iOS / IPOS, Kufanele ngikuxwayise ngokumelene nabo, ngikumeme ukuthi ungawasebenzisi: amathuluzi avela eceleni avela kulolu hlobo, empeleni, awavikelekile ngoba kufanele angene ngemvume nge-akhawunti yakho yenethiwekhi yezithombe eyaziwayo.
Ngakho-ke, ngokuyisebenzisa, ungafaka engcupheni yokugenca i-akhawunti yakho. Instagram kanye nokuvinjelwa kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu, njenge Instagram ayikukhuthazi ukusetshenziswa kwezicelo zezinkampani zangaphandle ezingahlobene ngqo.
Lokho kusho ukuthi, ukuze uphumelele enhlosweni yakho, ukwazi ukuthi obani abantu ababheka iphrofayili yakho ye-Instagram, ungasebenzisa ithuluzi elisemthethweni. Izibalo de Instagram lokho kunikezelwe ekuhlaziyweni kwe- ama-akhawunti ezinkampani e-Instagram Los UMdali futhi ihlanganiswe ngqo nesicelo se-Android ne-iOS / iPadOS yenethiwekhi yezithombe eyaziwayo.
Ngakho-ke, ukwazi ukuthi ungazisebenzisa kanjani, landela ngokucophelela izinqubo engizokunika zona ezahlukweni ezilandelayo, ukuze uphumelele emzameni owuhlongozile.
Ngalokho kusho, sekuyisikhathi sokuqhubekela engxenyeni ebonakalayo yalesi sifundo. Ezahlukweni ezilandelayo, empeleni, ngizokunikeza lonke ulwazi lokuthi ungalisebenzisa kanjani leli thuluzi. Izibalo de Instagram, ukuze ukwazi ukuhlaziya izibalo ezihlobene ne-akhawunti yakho.
Ngakho-ke, landela izinqubo ozothola ukuthi zichaziwe ezigabeni ezilandelayo, ukuze uphumelele kalula futhi ngokushesha enhlosweni yakho.
Ukuze ukwazi ukuhlaziya izibalo zephrofayili yakho, ngokusebenzisa ithuluzi Izibalo kuhlanganiswe isicelo Instagram kuma-smartphones kuyadingeka ukuthi ube i-akhawunti yenhlangano ye-instagram Los UMdali, noma udinga ukushintshela kokugcina kusuka ku- i-akhawunti yomuntu siqu ye-Instagram.
Ngalo mqondo, kufanele wazi ukuthi izinzuzo zokusebenzisa i- i-akhawunti yenhlangano ye-instagram Los UMdali bhekisa kwikhono lokungeza imininingwane mayelana nenkampani yakho, kanye nokukwazi ukusebenzisa ithuluzi Izibalo, esetshenziselwa ukwenza ukuhlaziywa okuningiliziwe kwephrofayela yakho. Le nqubo ingukuhlinzwa okungenziwa nganoma yisiphi isikhathi, kuyabuyiselwa emuva futhi kukhululeke ngokuphelele.
Lokho kusho, ukwenza switch ku i-akhawunti yenhlangano ye-instagram Los UMdali qhubekela phambiliisithonjana semenyu kuhlelo lokusebenza Instagram bese uthinta into Izilungiselelo.
Bese ufika esigabeni I-Akhawunti> Shintshela kwi-akhawunti esebenzayo, ukukhombisa a isigaba ku-akhawunti Instagram ezandleni zakho. Ekugcineni, khetha uhlobo lwe-akhawunti yezobuchwepheshe ofuna ukuyakha (UMdali Los Inkampani) ukuqedela ushintsho futhi ngokuzithandela futhi uxhume ikhasi le-Facebook.
Ngalo mqondo, uma kwenzeka ukungabaza noma izinkinga maqondana nokwenziwa kwale nqubo, noma ukuthola eminye imininingwane ngayo, thintana nomqondisi wami ozinikele ikakhulukazi kuleyo ndaba.
Ukuhlaziya izibalo ze-akhawunti yakho Instagram Ukuphela kokufanele ukwenze ukuya esigabeni sakho iphrofayili ukucindezela ku-athikili Bona iphaneli labachwepheshe.
Bese ucindezela amagama Bona yonke imininingwane ye-Insights, ukufinyelela isigaba esibiziwe Izibalo okungaba wusizo ukuhlaziya iphrofayili yakho ku- izinsuku eziyi-30 ezedlule noma ku Izinsuku eziyi-7 zokugcina.
Phakathi kwezigaba zentshisekelo yakho kunaleyo ebizwa Ukubuka konke, ekhombisa inani le- ama-akhawunti afinyelelwe nephesenti le- ukuxhumana nokuqukethwe.
Ngokucindezela esikhundleni sento Khombisa konke, ngokuhambisana namagama Izithameli zakho, uzobona ukukhula ngokwemigomo ye- umlandeli, Mina izindawo ezidume kakhulu, lo ububanzi beminyaka nolunye ulwazi oluhlobene nalabo abakulandelayo, njengabo unomusa le amashejuli ei izingoma lapho besebenza khona kakhulu.
Uma kwenzeka uxhume ikhasi Facebook ku-akhawunti yakho Instagram Uzoba nentshisekelo yokwazi ukuthi yonke imininingwane ephathelene ne- Izibalo Futhi zingabukwa kusuka kukhompyutha, ngensizakalo yeSitudiyo Sabadali ye- Facebook.
Kulesi simo esithile, empeleni, ngemuva kokungena ngemvume ku-akhawunti yakho Instagram, kufanele nje uchofoze kuthebhu ebizwa Izibalo ukubona, kuthebhu Okusesidlangalaleni, lonke ulwazi oluhlobene ne- umlandeli ye-akhawunti yakho ye-Instagram, efana nalokho okubonayo esigabeni Izibalo ukusetshenziswa kwe Instagram.
Uma, ngokuphambene nalokho, ufuna ukwazi amagama ababukeli izindaba okuthunyelwe, khona-ke uzojabula ukwazi ukuthi ukulandelela lolu lwazi kulula kakhulu futhi awudingi ukuba ne- i-akhawunti yenhlangano ye-instagram Los UMdali.
Lokho kusho, iya esigabeni sakho iphrofayili bese ucindezela okwakho isithombe sephrofayili, bheka i izindaba ithunyelwe nguwe kamuva nje. Uma usuqedile, swayiphela phansi bese ucindezelaiso leso, ukufinyelela imenyu Amaphuzu umbono lapho ongahlangana nami amagama labantu ababone indaba yakho.
Ngalo mqondo, uma kwenzeka ukungabaza noma izinkinga, noma ukuthola eminye imininingwane, thinta umhlahlandlela wami lapho ngikutshela khona ngqo ukuthi ungabona ukuthi ngubani obona izindaba ku-Instagram.
Ungazivimba kanjani izingcingo zevidiyo ku-WhatsApp